लालबाबु पण्डित देखि केही मान्छे सम्मलाई ग्रीनकार्ड भन्ने सुन्दा पनि ज्वरो आउँछ – Complete Nepali News Portal
लालबाबु पण्डित देखि केही मान्छे सम्मलाई ग्रीनकार्ड भन्ने सुन्दा पनि ज्वरो आउँछ
January 6, 2017	21,855 Views
अमेरिकाको ग्रीनकार्ड भन्नासाथ नेपालमा एकातिर आकर्सण छ भने अर्को तिर लालबाबु पण्डित देखि केही मान्छे सम्मलाई ग्रीनकार्ड भन्ने सुन्दा पनि ज्वरो आउँछ । के छ त ग्रीनकार्डको वास्तविकता अमेरिकामा । यो गीत मा मैले अमेरिकाको ग्रीन कार्डको खेल लाई यसरी प्रस्तुत गरेको छु । आशा छ गीत पुरा सुनेर आफ्नो प्रतिकृया सुझाब र कम्मेन्ट लेख्नुहुने छ । मेरो ३९ सौँ एल्बम अमेरिका ग्रीन कार्डको खेलको प्रमुख गीत तपाईंका लागि पुरै ।
अनुहार कालो हुनु न त्यो लालबाबु पण्डितको दोश हो न उनलाई जन्माउने आमाको । म उनको कालो अनुहारको र उनलाई जन्माउने आदरणीय आमा प्रति पनि उच्च सम्मान प्रकट गर्दछु तर लालबाबुको मन भित्रको कालो लाई भने म छि छि भन्न मात्र सक्दछु । केही सरकारी कर्मचारीको बहानामा बिदेशमा बस्ने नेपालीहरु र ग्रीनकार्ड लिएका नेपालीहरुलाई यिनले जसरी शत्रुतापूर्ण भनाइ राख्दै र व्यबहार देखाउँदै आएका छन उनी र उनी जस्तै केही कालो मन भएका लालबाबुहरुले एक पटक यो गीत पुरै सुनुन र बुझुन ग्रीनकार्ड भित्र लुकेको ब्यथा ! मेरो बिनम्र आग्रह छ । सरकारी सेवामा भएकाहरुको सन्दर्भमा त लौ ठिकै छ छानबिन गर, रोक त्यसमा भन्नु केही छैन तर सरकारी केही कर्मचारीको बहानामा किन अरु सबै नेपालीलाई पिर्छौ ?
तलका प्रश्न हरुको उत्तर पनि दिउन ति कालो मन भएका लालबाबुहरुले :
१- के नेपालीहरु सबै रहरले बिदेश गएका छन ?
२- के रहरले मात्र ग्रीनकार्ड होल्डर भएका छन ?
३- हरेक दिन तल्ला र उपल्ला बाटा हुँदै र धुरु धुरु रुँदै नेपालीहरु देश छोडेर बिदेश जानु पर्ने परिस्थिती कसले कसरी किन सिर्जना गर्‍यो ?
४- तिमी जस्ता लालबाबुहरुले हरेक दिन बिदेश बाट बन्द बाकसमा फर्किएका लाशहरुको मर्म कहिलै बुझ्ने प्रयास गरेका छौ त ?
५- तिमी सभासद, साँसद र मन्त्री हुँदा तिनै बिदेशमा बस्ने नेपालीले पठाएको रेमिट्यान्सबाट तलब भत्ता बजाइरहेको कुनै दिन महसुस गरेका छौ ?
६- के देश भित्रै तिमीहरुले रोजगारी र अबसर दिएका भए कुनै नेपाली बिदेशिन वाध्य हुन्थे त ??
७- सरकारी सेवामा भएकाहरुको सन्दर्भमा त लौ ठिकै छ छानबिन गर, रोक त्यसमा भन्नु केही छैन तर सरकारी केही कर्मचारीको बहानामा किन अरु सबै नेपालीलाई पिर्छौ ?
Writer : Ram Prasad Khanal